साउदीमा हाल सम्म कै ठूलो परिवर्तन, अब महिलाले पनि गाडी चलाउन पाउने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
साउदीमा हाल सम्म कै ठूलो परिवर्तन, अब महिलाले पनि गाडी चलाउन पाउने
आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:४५ मा प्रकाशित !
एजेन्सी। साउदी अरबले रुढीवादी परम्परालाई तोढदै आधुनिक मान्यतातर्फ कदम अगाडि बढाउँदै लगेको छ। यसैको कडीका रुपमा साउदी अरबले महिलालाई ठूलो स्वतन्त्रता प्रदान गर्दैछ। आगामी २४ जुनदेखि साउदी अरबका महिलाले एक्लै सडकमा गाडी चलाउन पाउने भएका छन्।
साउदी अरबमा परम्परा र धर्मको नाममा महिलामाथि कयौं प्रकारका प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जसमा ड्राइभिङ गर्नु पनि शामेल थियो। यद्यपी साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले यी परम्परालाई हटाएर नयाँ फैसला लिएका छन्, र भनेका छन्, ‘आगामी २४ जुनदेखि महिलामाथि ड्राइभिङ गर्न लगाएको प्रतिबन्ध पूरै हटाइने छ। अब महिला स्वतन्त्र रुपबाट गाडी चलाउन सक्नेछन्।’
साउदीका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले गत वर्ष महिलाले गाडी चलाउन नपाउने प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेका थिए। महिलालाई पनि सवारी चलाउन दिने निर्णयो चौतर्फी स्वागत गरिएको थियो। राजकुमारको यस्तो घोषणापछि साउदका कयौं शहरमा त्यसकालागि ड्राइभिङ स्कुल पनि खोलिएका छन्। विशेष गरी महिलाकालागि साउदीका पाँच शहरमा ड्राइभिङ स्कुल सुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
तर, ती स्कुलमा ड्राइभिङ सिकाउन महिलालाई नै राखिएको छ। ती महिलाले विदेशमा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएका थिए। साउदी अरब यस्तो एक्लै देश हो, जहाँ महिलालाई गाडी चलाउन प्रतिबन्ध थियो। एक अधिकारीका अनुसार अब यो प्रतिबन्ध हटाइँदै छ र १८ वर्ष उमेर पुगेका युवती वा महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्सकालागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
साउदीमा परिवर्तनको नयाँ दौड सुरु भएको छ। यीह क्रममा यसअघि सिनेमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइसकिएको छ। साउदीका दुई शहरमा अहिलेसम्म सिनेमा हल खुलिसकेका छन्। जहाँ महिला पनि सिनेमा हेर्न पाउँछन्। यसअघि साउदीमा महिलालाई सिनेमा हेर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
PREVIOUS POST Previous post: विराट कोहलीको बैंगलोर आइपीएलबाट आउट
NEXT POST Next post: यी हुन् कर्णाली प्रदेशका ठूला आयोजना, जसले गर्ने छन् कर्णालीको ‘कायापलट’
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:४५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:४५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:४५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:४५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:४५